समाचार Archives - Page4of 337 -
काठमाडौं । सिरहाको लहानस्थित मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा दुईजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका–५ का २५ वर्षीय रामरिझन यादव र लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–३ का २६ वर्षीय अभिमन्यू गिरी रहेका छन् । उनीहरुलाई सुखीपुर नगरपालिका–५ बाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यही चैत १...
ललिता निवास प्रकरण : भट्टराई र नेपाल सरकारले गरेका निर्णय झिकाउन आदेश
काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको पालामा मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएका निर्णय मगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको सोमबार बसेको इजलासले त्यस बेला मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा तीसम्बन्धी प्रस्ताव समेतको प्रतिलिपि झिक...
काठमाडौं । चिनियाँ लगानीकर्तालाई ठगेको आरोप लागेका लमजुङ घर भएका गमबहादुर लामिछानेलाई प्रहरीले बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा पक्रेको छ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले शनिवार लाजिम्पाट स्थित एम्बेस्डर होटलबाट पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा गमबहादुरले दिएको दुई करोडको च...
काठमाडौंको वायुमण्डलमा एक्कासी कहाँबाट आयो बाक्लो धुलोधुवाँ?
काठमाडौं । शुक्रबार दिउँसोबाट काठमाडौं उपत्यकाको वायुमण्डल प्रदूषित बनेको छ। धुवाँ र तुवाँलो जस्तो देखिने प्रदुषणले जनजीवनलाई पनि अत्यासलाग्दो बनाएको छ। दिउँसो करिब २ बजेबाट वायुमण्डलमा धुलोसँगै धुवाँ मिसिएको मौसमविद राजु प्रधानाङगले बताए। ‘धुलोसँगै धुवाँ मिसिएर आएको पाइएको छ। वरपर कतै डढेलो लागेर हावाले उडाएर ल्याएक...
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारागारमा रहेका जसपाका सांसद रेशम चाैधरीलाई भेटेका छन्। चाैधरीलाई भेटेर उनले मुद्दा सहजीकरणका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार चाैधरीलाई भेट्न पुगेका बस्नेतले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दालाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालनी गरेक...
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सङ्क्रणको जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले विद्यालयमा पठनपाठन गर्दा भीडभाड नगर्न तथा जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डको कडाइसाथ पालना गर्न आग्रह गरेको छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकले शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्वास्...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई १ सेकेण्ड पनि सत्तामा बस्ने नैतिकता नभएको बताएका छन् । बिहीवार विराटनगर पुगेका नेता सिंहले नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको भेटघाटमा बोल्दै ओलीले असंवैधानिक कदम उठाएर नैतिकता गुमाईसकेकाले १ सेकेण्ड पनि सत्तामा बस्ने नैतिकता नभएको बताएका हुन् । स...
काठमाडौं । ललितपुरमा एटिएम तोडफोड गरी चोरी गर्न खोज्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । ललितपुर महानगरपालिका १४ खुमलटार र बिशालचोकस्थित दुई वटा बैंकको एटिएम फुटाई नगद चोरी गर्न खोजेको अभियोगमा ललितपुर च्यासल बस्ने गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका ५ का भएका ३० वर्षीय भेष बहादुर थापालाई मंगलवार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । थापाले ललित...
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो- लकडाउन हुन सक्छ!
काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमितको संख्या उच्च भएमा लकडाउन हुन सक्ने बताएको छ । सङ्क्रमणको चक्र रोक्नका लागि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको हो । बुधबार मन्त्रालय द्वारा आयोजित नियमित मिडिया ब्रिफिङमा सह प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले मानिसहरुले अनावश्यक भ...
नेपालमा पनि केही हप्तामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने अनुमान
काठमाडौं। भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको बढ्दै गइरहेको बेला नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ। इपीमिडियोजिष्ट डा. अर्चना श्रेष्ठले नेपालमा पनि केही हप्तामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने बताइन्। भारतमा पनि पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने उनको भनाइ छ। यसले दीर...